Shoes – FemaleWear.net
အေးတဲ့နေရာတွေသွားရင် Boot ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အပြတ်လန်းနိုင်ဖို့
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဝယ်တာအတောမသတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းထဲမှာ ဖိနပ်ကလည်း မပါမဖြစ်လေ မှားသွားပြီလား? ? ဘယ် brand ကထုတ်တာမို့ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အရောင်လေးကဆွဲဆောင်နေလို့ ဝယ်လိုက်တာတွေကလည်း တစ်ပုံကြီး တန်လွန်းလို့ဝယ်ထားလိုက်တာ သိပ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူလေးတွေက ရှိသေး? အဲ့လို ဖိနပ်ကိုမှ ရူးခါနေအောင်ကြိုက်တဲ့ သူလေးတွေအတွက် အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ စီးလိုက်ရင် အထာကျချက်ကတော့9ကျော်တဲ့ ဒါပေမယ့်…
အသစ်အဆန်းတွေ အမြဲဖန်တီးတတ်တဲ့ Miley Cyrus တစ်ယောက်ကတော့ Converse နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး sneaker ဒီဇိုင်းအသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စတိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့ရမယ့် ဒီ sneaker တွေကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ Pride 2018 အတွက် LGBT တွေကို ရည်ရွယ်ပြီး Rainbow…
ဆောင်းရာသီကုန်လို့ နွေရာသီဘက်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့ ရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Fashion လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ကြရပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ Quality ကောင်းကောင်းဖိနပ်လေးတွေကို ရွေးချယ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ တချို့ brand ကျလည်း စျေးအရမ်းကြီးသလို၊ စျေးသိပ်မရှိတဲ့ ဖိနပ်လေးတွေလည်းပါဝင်လို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 1. J.Crew ဒီ shoe…